Mpisolovava ny depiote Razafindrazalia Y. : “Tokony hohajaina aloha ny lalàmpanorenana” | NewsMada
Mpisolovava ny depiote Razafindrazalia Y. : “Tokony hohajaina aloha ny lalàmpanorenana”
“Raha mbola tsy mipoitra na manomboka ny fanenjehana, ka efa solombavambahoaka ilay olona: tokony harahina aloha izay voalazan’ny lalàmpanorenana.” Io ny fanazavan’ny Me Rajaonarivelo Lala, mpisolovava ny depiote vaovao ao Mahabo, Razafindrazalia Yvonne, misolo toerana ny vadiny, Raveloson Ludovic na i Leva.
Niakatra fampanoavana teny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), 67 ha, afakomaly, io solombavambahoaka vaovao io, taorian’ny famotorana azy teny amin’ny tobin’ny zandary, Fiadanana. Nahazo fahafahana izy taorian’izay fiatrehany ny mpitsara teo anivon’ny Pac izay.
Efa solombavambahoaka izy
Tsy azo anaovana fampiakaran-draharaha intsony ny didy navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). “Araka izany, nangataka an’io fanapahana io izahay ary nangataka izany tany amin’ny filohan’ny Antenimierampirenena”, hoy ny mpisolovava azy. Efa misalotra ny anarana solombavambahoaka ny olona tazonin-dry zareo.
Araka izany, efa mizaka koa ny tombon-jon’ny mpikamban’ny parlemantera io depiote io. Voalazan’ny And. 73 ao amin’ny lalàmpanorenana izany. Nefa niakatra teny amin’ny Pac ihany ny raharaha, afakomaly. Mijery toy ny anakandriamaso ny lalàna mifehy eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny Pac. Tsy misy zavatra azo atao, satria efa napetrany ny antontan-taratasy rehetra ilazana fa solombavambahoaka Razafindrazalia Yvonne.